Madaxweynaha Galmudug oo daah furay Shirka Madasha Horumarinta Galmudug “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo daah furay Shirka Madasha Horumarinta Galmudug “SAWIRRO”
Shirka Madasha Horumarinta Galmudug ayaa maanta ka furmay magaalada Dhusamareb ee Caasimada Galmudug waxaana daah furay Madaxwaynaha Galmudug Ahmed Ducaale Geelle Xaaf, waxaana ka soo qeyb galay Ganacsato aad u fara badan kuwaasi oo danaynaya inay maal gashiyadaan deegaanada Galmudug.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Galmudug Maxamed Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in arinkani uu yahay mid lagu farxo, ganacsataduna ay gaari karaan heerar ay ku maalgashadaan deegaanadooda.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Gobolka Galgaduud Yaasiin Sheekh Maxamed ayaa tibaaxay inay muhiim tahay horumarinta iyo kor uqaadista kaabayaasha dhaqaalaha Galmudug.
Ugu dambayn Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ganacsatada u sheegay inay hurumariyaan Deegaan kooda, waxa uuna xusay in la siin doono dhulal ay dhistaan, isla markaana ka samaystaan goobo Ganacsi.
Shirkaan ayaa inta uu soconayo waxaa looga hadli doonaa arimo ay ka mid yihiin Hurumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha Galmudug iyo Ganacsatadu ay taageeraan Maamulka.
By: Maxamed Deeq Cabdi
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Safiirka Shiinaha oo ka wada hadlay caawinta Warbaahinta Soomaaliya “SAWIRRO”
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Safiirka Shiinaha oo ka wada hadlay caawinta Warbaahinta Soomaaliya "SAWIRRO"